पृथ्वी कै एक्लो ब्यक्ति जो २५६ बर्ष बाचे: आखिर कसरी बाचे यति धेरै बर्ष? अनौठो कारण(भिडियो सहित) « गोर्खाली खबर डटकम
पृथ्वी कै एक्लो ब्यक्ति जो २५६ बर्ष बाचे: आखिर कसरी बाचे यति धेरै बर्ष? अनौठो कारण(भिडियो सहित)
कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए।
‘हरेक गुफामा रहेका विभिन्न खालका आकृति असाध्यै सुन्दर छन्,’ उनले भने। स्थानीयले कुमाखमा रहेको गुफाबाट पठाएका कुकुरहरू बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ।
‘बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए,’ जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने, ‘तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन्।’
कुमाखको टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ। यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ। कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन्। त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन्।
कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ।
कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ। मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन्।
संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला।